Uxakeke kangakanani umsebenzi weTiger Woods? Kakhulu kakhulu. Ngosuku oluqhelekileyo loqeqesho, i-Woods intersperses ukuqeqeshwa kwe-cardio, uqeqesho lobunzima kunye noqeqesho oluphambili / uguquguquko kunye neenkqubo zakhe zegalufu.
Amatye ayesetyenziswe kwiziko lewebhu (i-tigerwoods.com) eyazinikezela ukufaneleka kwaye ichaza imimiselo yakhe yokufunda kunye nengcamango elandelayo. Eli candelo alisekho kwisayithi, hamba, kodwa siyakwazi ukuqonda ifilosofi yeFitness kwizinto ezake zathi:
"Igalofu ngumdlalo, ngoko kufuneka uqeqeshe njengomdlali."
Idibeneyo: Iyintoni isenzo segalufu seTiger Woods?
Uhlobo lweeTlanga UkuQeqesha ukuQinisekisa koBuchule kunye neZenzo zeGalofu
I-Tiger enye yabhala phantsi kwenkqubo yakhe yokufunda kunye neshedyuli, ishedyuli eyadlulayo iiyure ezili-12 ukuya ku-7 ekuseni (okanye ngaphambilana) ukuya ku-7 ntambama Ngeeyure ezisixhenxe ukuya kwezi-ezisibhozo zinikezelwa ukuqhuba umdlalo wakhe wegalufu. Ezinye zazo zazinikezelwa kwixesha lokuphumla kunye nesidlo sasemini. Bonke abanye bathatyathwa ngokuqeqeshwa koqeqesho kunye nokwelula.
I-regimen yokuqhuba umsebenzi i-Woods ichazwe ibe yile:
Isiqhelo somsebenzi wemihla ngemihla siqala ngeyure yomsebenzi we-cardio ekuseni. Ngokuqhelekileyo i-Woods yenza enye yezinto ezintathu zelo lixa: ibhayisikili; ukunyamezela kweemitha ezili-7; okanye i-speed-3 miles.
Iyure ye-cardio ilandelwa liyure yoqeqesho lobunzima, ukuphakamisa ama-60 ukuya kuma-70 ekhulwini kwimizila yakhe eqhelekileyo kwaye igxininise kwiintlobo ezininzi zeesethi kunye neeseti ezahlukeneyo. Ngoko ke iiyure ezimbini zomsebenzi wokuqina ngomso kusasa ngaphambi kokutya kwasekuseni.
Ekupheleni kosuku oluqhelekileyo - emva kokuba i-Woods isichitha ixesha elide kwimigangatho yakhe yegalufu - ubuyela ekusebenzeni kwakhe umzimba kunye neminye imizuzu engama-30 kwiisisindo, isebenza ngamandla omzimba.
U-Woods wabhala kwiWebhsayithi yakhe ukuba welula ixesha elide ukuya kwiminithi engama-40 ngaphambi kokuba asebenze.
"Ndijonge ukuqina njengomsebenzi wexesha elide lokwakha nokugcina uxinezelo, amandla kunye nobuchule," kusho uThomas.
"Umjikelezo oqhubekayo wokuqeqesha nokuphucula."
Iprofayili kaTom Weiskopf
Yiyiphi i-Tiger Woods Abaxhasi abaye bamlahla njengeSiphumo seScandals?
Yintoni eyenzekayo phakathi 'Ukubuya kweJedi' kunye 'neQumrhu eliVusayo'
Inkolo kunye nenkolelo-ze
I-pigment Definition kunye neKhemistry
I-Cross-Price Elasticity of Demand
Umthetho 28: Ibhola elingabonakaliyo (iMithetho yeGolf)
Isikhokelo se-7 Iifom zeNdabuko zeLightsaber Ukulwa kwi 'Star Wars'
Iziphakamiso: Amagama amancinci kunye anamandla aqhuba izivakalisi zesiFrentshi